Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Qatar Airways dia manitatra tamba-jotra amin'ny toeran-tsoa mihoatra ny 140 amin'ity fahavaratra ity
Qatar Airways dia mitohy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra manerantany, manolotra ny sidina betsaka indrindra mankany amin'ny toerana iraisam-pirenena
Qatar Airways dia hiasa mihoatra ny 1,200 23 matetika isan-kerinandro manerana ny toerana 14 atsy Afrika, 43 any Amerika, 43 any Azia-Pasifika, 19 any Eropa ary XNUMX any Moyen orient
Qatar Airways dia manolotra safidy mora azo kokoa amin'ny mpandeha amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Hamad
Tsy nitsahatra nanidina nanerana ny areti-mandringana ny sidina ka mijanona ho iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra ho an'ny fiarovana sy ny fanavaozana
Qatar Airways dia faly nanambara ny fandaharam-potoanan'ny fahavaratra, mitazona ny toerany ho mpitatitra iraisam-pirenena lehibe manome fifandraisana azo itokisana manerantany. Tsy nitsahatra nanidina nanerana ny areti-mandringana ny kaompaniam-pitaterana dia niasa tamim-pahazotoana ho zotram-piaramanidina lehibe indrindra ho an'ny fiarovana, ny fanavaozana ary ny traikefan'ny mpanjifa. Amin'ny tampon'ny vanim-potoana fahavaratra IATA, mikasa ny hiasa sidina 1,200 140 mahery isan-kerinandro mankany amin'ny toerana XNUMX mahery ny mpitatitra nasionalin'ny State of Qatar.
Qatar Airways Ny Lehiben'ny Executive Group, ny Andriamatoa Akbar Al Baker, dia nilaza fa: "Faly izahay mitarika ny famerenana ny fiaramanidina iraisam-pirenena, amin'ny fampiharana ny fenitra avo lenta momba ny fiarovana ny bio sy ny fahadiovana ary ny fampiasam-bola amin'ny fanavaozana farany hanatsorana ny dia sy hamerenana ny fahatokisan'ny mpandeha mandritra ny ny vanim-potoana sarotra indrindra amin'ny tantaran'ny sidina.
"Tsy nitsahatra nanidina nanerana ny areti-mandringana izahay, nampiasainay ny traikefa tsy manam-paharoa sy ny fiaramanidina maoderina, mahomby solika mba hampandehanana tambajotra maharitra sy azo antoka iankinan'ny mpandeha sy ny mpiara-miasa ary ny mpanjifa orinasa anay. Manohy manolotra tambajotra iraisam-pirenena lehibe indrindra koa izahay, ao anatin'izany ny fandefasana toerana vaovao fito, hanomezana ny fifandraisana izay ilain'ny mpandeha sy ny mpanjifan'ny entana.
“Rehefa manomboka miha-mahazo vahana ny vaksinin'ny vaksinina manerantany, manantena ny fanalefahana tsimoramora ny fameperana fidirana izahay mandritra ny 2021 ary miarahaba antsika mpandeha an-tapitrisany maro ao amin'ny Airline Best World.”
Ny Qatar Airways Cargo dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fitazonana fandaharam-potoana azo itokisana manerana ny tambajotran'ireo toerana itodiana. Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mifindra, Qatar Airways dia nanampy tamin'ny fitaterana fitaovam-pitsaboana 500,000 15,000,000 taonina mahery ary nanolotra vaksiny COVID-19 mihoatra ny 20 amin'ny firenena XNUMX mahery. Ny mpitatitra entana dia manohy mifantoka amin'ny fanohanana ny orinasan'ny mpanjifany sy ny fampandehanana ny varotra manerantany, ary manohana ireo faritra voadona manerantany.
Qatar Airways dia manohy manitatra ny tambajotran'ireo toerana itodiana, manome sidina bebe kokoa mankany amin'ny toeran-tany iraisam-pirenena noho ny orinasam-pitaterana an'habakabaka hafa. Tamin'ny tapaky ny fahavaratra 2021 dia nikasa ny hanangana ny tamba-jotra hatrany amin'ny 140 ny toeran'i Qatar Airways ka 23 ny any Afrika, 14 ny aty Amerika, 43 ny any Azia-Pasifika, 43 ny any Eropa ary 19 ny Afovoany Atsinanana. Tanàn-dehibe maro no hotompoina miaraka amin'ny fandaharam-potoana matanjaka miaraka amin'ny refesina isan'andro na mihoatra.